Ngaphansi kwesizinda seCovid 19, abantu badinga ukuzivikela ngokugqoka imaski yobuso namagilavu. Indlela esebenza kahle kunazo zonke kufanele ibe ngamaski okugqoka. Sihlolisise imaski yobuso besiliva engabulala amagciwane atheleleke ngomgudu wokuphefumula, ingamelana nama-99.9% egciwane le-HIN1. UDkt JinJian Fa ...
Njalo ngonyaka, inkampani ye-3ltex izobamba iqhaza emibukisweni emikhulu yaseChina nakwamanye amazwe ehlobene nama-techtextils, ukuphepha kanye nempilo. I-A + International Trade Fair neCongress umcimbi omkhulu kunayo yonke emkhakheni wezokuPhepha, ukuPhepha kanye nezeMpilo eWor ...
Njalo ngonyaka, inkampani ye-3ltex izobamba iqhaza emibukisweni emikhulu yaseChina nakwamanye amazwe ehlobene nama-techtextils, ukuphepha kanye nempilo. I-Techtextil umbukiso wezokuhweba wamazwe omhlaba oholayo wezindwangu zobuchwepheshe kanye nama-nonwovens, izokwethula ...